> Resource > iPad > Sida loo dar Photos in iPad
Maxay tahay sababta aan u leeyihiin in ay u hagaagsan maktabadda sawir iyo tirtirto dhammaan sawirada on my iPad? Ma Waa maxay sababta aan kaliya gali kartaa sawiro la xusho oo ka dhan kombiyuutarada kala duwan aan haysan ee guriga (aan heysano aad u badan) ama computer saaxiibkay ayaa?
Dhab ahaantii, ma aha in aad leedahay si aad u hagaagsan maktabadda sawirka si aad u photos daro in iPad. Halkii, waxaad ku dari kartaa sawiro eegista kombiyuutar kasta si aad iPad, oo ma sawir khasaaro. Si aad oga, kaliya aad u baahan inuu u jeesto ah kala iibsiga sawir iPad caawimaad. Waa Wondershare TunesGo (dadka isticmaala Windows). Marka aad isticmaasho Mac, fadlan isku day Wondershare TunesGo (Mac) . Labada nooc oo qalab awood u aad ku darto oo dhan ama soo xulay sawiro maktabadda Photo ku saabsan iPad effortlessly. Waxa aad u la yaab tahay in qalab taasi marnaba tirtiri doonaa wax kasta oo sawir ku iPad haddii aad rabto inaad si.
Download iPad qalab sawir kala iibsiga si sawirro daro in iPad.
Fiiro gaar ah: Halkan, waxaan ku siin la info ah oo faahfaahsan oo ku saabsan taageeray iPads, macruufka iyo Windows OS iyo in ka badan .
Sida loo sawiro daro in iPad
Qaybtan, waxaan diirada doonaa version Windows ee qalab, oo ah, Wondershare TunesGo. Haddii aad isticmaasho version Mac ah, waxa kale oo aad qaadi karaan tallaabooyinka ka mid ah.
Tallaabada 1. Orod this iPad qalab kala iibsiga sawir
First of dhan, rakib oo ay maamulaan this iPad kala iibsiga sawir qalab aad kombuutarka. Muuqataa doonistii suuqa kala Tani aad screen PC.
Tallaabada 2. Isku aad iPad in kombuutarka
Connect aad iPad in kombuutarka oo isticmaalaya cable USB ah. Haddii iPad qalab sawir kala iibsiga ogaadaa aad iPad, waxaa tusi doonaa iPad uu furmo suuqa hoose.
Tallaabada 3. photos Gasho iPad
Guji "Sawirro" geedkii ka soo buugga bidix. Roll Camera iyo Photo Library muujiyaan ilaa uu furmo suuqa sawirka. The albums abuuray qalab this sidoo kale sidoo kale jiri doona in uu furmo.
Haddii aad doonayso in lagu badbaadiyo sawirrada ku daray in album ah, waxaad sidoo kale riixi kartaa "Add" si ay u abuuraan album cusub ama isticmaal mid ka jirey. Fur album oo guji "Add" mar kale. Raadi si aad sawiro doonayay aad kombuutarka iyo iyagoo aad ku dartid aad iPad.
Maxaa dhacaya haddii aan jecleyn in aad badbaadin photos in album ah? Xaaladdan oo kale, waxa aad furan kartaa Library Photo ah. Saaro aad sawiro doonayo ku yaal.
Fiiro gaar ah: Ka hor inta ku daray in ay sawiro iPad, aad tirtirto kartaa sawiro la rabin on your iPad ee photos cusub in la sameeyo qol.
Si wanaagsan baad yeeshay! Waxaad sawiro ku daray in ay aad iPad. Tubada "Sawirro" on your iPad. Waxaad ka heli doontaa in ay sawiro jir ah ayaa weli waxaa jira. Waxay si fiican u shaqeeyaa, miyaanay ahayn? Iyadoo qalab this, waxaad ka dhigi kartaa sawirro iPad si xor ah oo aan ka werwerayn oo ku saabsan khasaaraha sawir.
Download Wonedshare TunesGo in ay la kulmaan sida loo dhigay sawiro on iPad.